Thenga i-Smart Drug Sunifiram powder online | AASraw
/Blog/Sunifiram/Thenga i-Smart Drug Sunifiram powder online
ezaposwa ngomhla 05 / 04 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Sunifiram.
2.Yintoni i powderir powder?
3. Iinzuzo ze-Sunifiram powder
I-4.Iyiphi i-Sunifiram powder Works?
5. Indlela yokusebenzisa i-powder Sunifiram?
6.Sunifiram powder Isisombululo
7. I-Sunifiram powder Ukubetha
8. I-Sunifiram powder Imiphumo yangaphandle
10.Izibonelelo zokuthenga i-Sunifiram powder evela ku-AAS Sunifiram umphakeli we powder:
I.Sunifiram (DM235) isiseko se powder Abalinganiswa:
I powifiram powder enye yeyona entsha ye-nootropics kwimarike iziyobisi intsapho. Kucatshangelwa ukuba kwintsapho yama-ampakine yezibonelelo. Iyakwandisa ingqwalasela yomntu, ukwenza izigqibo, kunye nokukwazi ukufunda. Nangona kukholelwa ukuba isebenza kangangoko iPiracetam, inamandla kakhulu xa kuthelekiswa. Isakhiwo siyafana, kodwa abanye baye babika i-Sunifiram powder ibe ngamaxesha e-1000 ngaphezulu. Ngokubhekiselele ekusebenzeni kwayo, kuyafana Noopept.
Kuphandwa njengenkumbulo yeememori, ezinokunyanga izigulane ze-Alzheimer. Inika iintlobo ezininzi zeenzuzo kuquka; ukongezwa kwexesha, ukugxilwa kophuhliso, kunye nokwandiswa kokufunda. Liye lathandwa kakhulu ukususela ekukhutshweni kwalo, njengoko iinzuzo ziphezulu kwaye iziphumo zecala ziphantsi.
2.Yintoni I powifiram powder?
Igama: I-Sunifiram powder (DM235) ipowder
I-Formula ye-molecular: C15H13F2NO2S
I-Melt Point: 57-58 ° C
Isitoreji sokugcina: Ukugcina kwindawo yokushisa okanye ukupholisa
Umbala: I-powder emhlophe okanye emhlophe
3.Iinzuzo ze-Sunifiram powder
Ukufunda kunye nenkumbulo: I-powder Sunifiram iboniswe ukuba isebenze njenge-nootropic enamandla, inikezela ukuphuculwa okulinganiselwe kwisantya sokufunda, ukugcinwa kwememori nokukhumbula. Izifundo zezilwanyana zibonise ukuba i-Sunifiram powder eluhlaza ayinakwenziwa kuphela ekuqhutyweni komsebenzi kwimisebenzi yokufunda, ngokuqinisekileyo yatshintsha i-amnesia eyenziwa ngamakhemikhali.
Ukugxilwa kokugxilwa kunye nokukhuthazwa: Abasebenzisi be-Sunifiram be-powder bahlala bebika ukuba kubangele kugxininise ngakumbi nokugxininisa kwaye kuphuculwe ukukhuthazwa kwabo bobabini kunye nokugqiba imisebenzi yengqondo, kunye nokufundiswa kwezilwanyana kuthatha ukunyamezela oku. Imiphumo yokugxilwa kunye nokukhuthaza izizathu ezinokubangela ukuba igalelwe kwinxalenye yokuba i-Sunifiram powder iququzelela ukukhululwa kwe-acetylcholine, i-neurotransmitter ehambelana kakhulu nekhono lokuqonda.
Ukuxhalabisa nokuphathwa kwengcinezelo: Nangona izilwanyana zezilwanyana zingacetyanga ukuba i-Sunifiram powder eluhlaza ikhupha i-anti-depressant okanye i-stress relief, abanye abasebenzisi bayichaza ukuba le miphumo. Le miphumo ingacaciswa ubuncinci inxalenye kwizenzo zayo njenge-ampakine, okanye i-compound esebenzisana ne-glutamatergic receptors ye-glutamatergiti kwaye yenza njengento evuselelayo.
I-Mood ne-booster amandla: Abasebenzisi abaninzi bathi i-Sunifiram powder ibanika amandla angakumbi kunye nokukhanya, kubonwa ngokuvuya.
Ukuphucula okubonakalayo / ukuqonda: Nangona iingxelo zomsebenzisi ezibonakalayo kunye nophuculo olubonakalayo zivela kwihlabathi jikelele, abantu abaninzi bathi ukuthatha i-Sunifiram powder eluhlaza kubanika umbono ocacileyo ngendlela engokoqobo, okwenza ukukhanya kunye nesithunzi kufakwe ngakumbi kwaye imibala ingakumbi. Kwabanye abantu, kwakhona kwenza umculo uphelele ngokwengqondo nangokwemvakalelo.
Ukwanda kwezesondo zokuhamba ngesondo: Ipesenti ephezulu yabasebenzisi ibika ukuba i-Sunifiram ipowder eluhlaza inempahla ecacileyo neyabonakalayo, ikhulisa umdla wabo ngesondo. Esi siphumo asibonakali siyindalo kwaye asizange sichazwe kwizifundo zezilwanyana.
Ngokusekelwe kuphando kunye nokuphononongwa kwabasebenzisi, izibonelelo zininzi. Kukho uluhlu lwezibonelelo, zonke eziphathelene nokuphuculwa kwengqondo. Yingakho i-Sunifiram powder ithandwayo phakathi kwabafundi. Ukwandisa amandla omntu wokugxila, kunye nokukhumbula ulwazi.
I-Sunifiram ipowder eluhlaza ikhulisa amanqanaba ombane, evumela abasebenzisi ukuba bazive benamandla ngakumbi kwaye banqande ukukhawuleza. Abasebenzisi babika ukuba banamathuba amaninzi, abafuna ukwenza izinto. Oku kuyathandwa phakathi kwabafundi okanye abasebenzi, njengoko engenzi iziphumo ezimbi ezimbi njengeRitalin okanye Adderall. Olu konyuka kumanqanaba ombane kunye neengqalelo zengqondo, luyimiphumo yomsebenzi wokwanda kwe-glutamate.
Amanqanaba okunyuswa kwengqondo, kwaye abasebenzisi bazizwa bengaphazanyiswa ngento engaphandle. Kwakhona, oku kwenza ukuba kusebenze xa ufunda. Abasebenzi abathile baya kuzuza, ngokukodwa kwilizwe elikhuphisanayo.
Kukho uphando oluninzi oluqhutywe malunga nenkumbulo. Ininzi inzuzo ibonwa ngokuphathelele imemori yesikhashana okanye imemori yokusebenza. Inqanaba lokukhumbula likhula ngokukhawuleza, njengoko abanye abasebenzisi babike ingxelo yengxelo kanye kunye nokukhumbula iiyure kamva. Uphando olusandul 'ukuqala lubonise ukuba i-Sunifiram powder iphinde ithuthukise ukukhutshwa kwexesha elide, oko kukubunjwa kwezinto ezintsha ezinxulumene nokugcinwa kwememori.
Amanqanaba okuxhalaba anciphisa, njengoko i-Sunifiram ipowder eluhlaza inezinzuzo ezithile zexhalaxytic. Ukuziva ukhululekile kunenzuzo xa uzama ukugxila.
4.Iyintoni Imisebenzi ye-powder Sunifiram?
I-powder Sunifiram isebenza ngendlela efanayo nakweminye imirhubhe, evuselela ezininzi iindwendwe ezifanayo. Kuyaziwa ngokukhuthaza ama-receptors ase-AMPA, nto yoko kuthathwa nje ngokuba yi-ampakine. Oku kuhambelana ngqo nomlinganiselo we glutamate ngaphakathi kwengqondo.
I-Glutamate ibalulekile, njengoko ijongene nokwenza uqhagamshelwano olutsha phakathi kwe-synapses. Xa unamazinga aphantsi e-glutamate, ubuchule bakho bokuqonda buyabandezeleka. Oku kubangela ukungathathi kakuhle, ukungakwazi ukufunda, kunye nemibandela ngememori. Yingakho i-Sunifiram powder ikhulisa ezi zinto. Izinga likaGlutamate linyuka, lenza iinzuzo zokuqonda.
NjengaPiracetam, amanqanaba e-acetylcholine achaphazelekayo. Xa kukhishwa i-acetylcholine engaphezulu, abasebenzisi banamaqondo aphezulu okuqonda, imemori, ukufunda nokugxila. Kukho ukwanda kwanxibelelwano phakathi kwama-hemispheres amabini engqondweni. Ukuthatha isongezelelo se-choline kwi-stack eqhelekileyo, ukukhusela iintloko.
Nangona i-Sunifiram ipayipi eluhlaza i-derivative ye-piracetam, inokwakheka kweekhemikhali ezahlukileyo ukusuka kumarcetam kwaye ikhemikhali ebizwa njenge-piperazine alkaloid. Kuyaziwa ukuba isebenze ngeendlela ezimbini, zombini njenge-ampakine evuselela umsebenzi we-glutamine receptors kunye ne-cholinergic eyenza ukuveliswa nokukhululwa kwe-acetylcholine.
Njengama-nootropics amaninzi, iindlela ze-Sunifiram ze-powder ezichanekileyo zenzo aziqondi ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, kukholwa ukuba inyathelo eliphambili lento ye-ampakine, oku kuthetha ukuba emva kokuwela i-barrier-brain barrier ithobela kwi-AMPA-uhlobo lwe-glutamate receptors kwingqondo. Oku kukhuthaza ukuveliswa kwe-glutamate, i-neurotransmitter ebalulekileyo edlala indima ebalulekileyo ekusebenziseni i-neural.
I-Glutamate yi-neurotransmitter exitatory ebaluleke kakhulu kwi-plastiki ye-synaptic, okanye ikhono le-nerve synapses ukuphendula ngokunyuka okanye ukuncipha kumsebenzi. Amanqanaba afanelekileyo e-glutamate ayimfuneko kwixesha elide lokubakho, okanye ukunyuka okuqhubekayo kumandla empawu phakathi kwe-neurons. Iinqanaba zeGlutamate zibaluleke kakhulu kwi-hippocampus, inxalenye yengqondo edlala indima ephambili ekuhambeni kweendawo zombini kunye nokubunjwa nokugcinwa kwememori, kwaye kukholelwa ukuba ubuninzi be-Sunifiram bukwazi ukuphucula ikhono lokuphucula ikhono ekugqibeleni liphunyezwa ngokuphucula amandla okubonakaliswa kwe-neural kule ngxenye yengqondo.
Ukongezelela ekuphuculeni ukubunjwa kwememori kwaye ukhumbule, ama-ampakine ngokuqhelekileyo asebenza njengezinto ezikhuthazayo ezinokunyusa ukuphaphama kunye namandla kodwa ngaphandle kokungazinzi kunye nezinye iziphumo ezimbi ezichaphazelekayo kunye ne-caffeine, i-methylphenidate (Ritalin) kunye ne-amphetamines.
I-Sunifiram powder eluhlaza icatshangelwa ukuba isebenze njenge-cholinergic, ikhulise umveliso kunye nokukhululwa kwe-neurotransmitter acetylcholine. Nangona inkqubo echanekileyo eyenzekayo engazange ibonwe, isifundo sezilwanyana sase-Italy sibonise ukuba iimvavanyo zisebenzisa i-piperazine i-Sunifiram powder yayinempembelelo efana neyo-piracetam.
I-Acetylcholine inxulumene ngokusondeleyo kunye neenkalo ezininzi zokuqonda, kuquka imemori, isivinini sokufunda kunye nokukwazi, kunye neengcaphephe zengqondo okanye amandla okulungisa iingxaki ezahlukeneyo ngaphandle kokuzithembela ekuziphatheni okufundayo. Ininzi i-nootropics isebenza ubuncinci kwinqanaba ngokunyusa ukufumaneka kwe-acetylcholine, mhlawumbi ngokukhuthaza ama-acetylcholine receptors okanye ngokubonelela ngokuthe ngqo kwintsimbi ye-acetylcholine.
5.Usebenzisa njani i-powder Sunifiram?
I-powder Sunifiram inamandla kakhulu, ngoko ke amanani amancinci kufuneka athathwe. Kuye kwathiwa kusebenza kakuhle xa kuthathwa ngokulandelelana. Oku kuthetha ukuba abasebenzisi bayifaka phantsi kweelwimi lwabo ukulungiselela. Oku kuya kuba yinto encinci ye-powder. Abanye abasebenzisi baye bafumana ukukhwaza okuncinci, njengokuba unokuphefumula. Ukungena kuye kwathiwa kulula.
Qala nge dose encinci, ubone indlela oziva ngayo. Uninzi lwabasebenzisi bavakalisa ukuva iimiphumo ngaphakathi kweyure yolawulo. Unako ukwandisa umlinganiselo wakho emva kweveki okanye njalo. Ekubeni i-dosing isacingwa, ungadluli i-10 mg. Sebenzisa ngokukhawuleza okanye ukhethe ukujikeleza amanani akho. Oku kuthetha ukuba uya kujikeleza 'ku' kwaye 'uhambe.' Ukusabalalisa amanani akho ngexesha leveki, kwaye uthabathe ikhefu.
Xa uthengiwe kwi-intanethi, unokwazi ukuba i-Sunifiram powder ixabisa kakhulu kunezinye i-nootropics. Gcina ukhumbule ukuba umyinge uncinci kunamanye ama-nootropics. Udinga kuphela umncinci ukufikelela kwiziphumo ezinkulu. Oku kubangelwa ukufumana amandla.
6.I-Sunifiram powder Isilinganisi
Kuza kube yimhla, ukuphela kweengxelo ze-Sunifiram zepowder ezifunyenwe zibandakanya izilwanyana kunokuba zifundo zabantu zenze kube nzima ukwenza iziphakamiso ze-clinical-backed on the dosage. Nangona kunjalo, kwaziwa ukuba i-Sunifiram ipowder eluhlaza kunamandla kakhulu kunamanye ama-racetam, kunye novavanyo olulodwa olubonisa ukuba i-Sunifiram powder i malunga namaxesha e-1000 anamandla kunepiracetam.
I-Sunifiram powder eluhlaza idinga umthamo omncinci kakhulu kunemizila yokusebenza. Ngokusekelwe kwintetho yomsebenzisi kunye nolwazi olufunyenweyo kwizifundo zezilwanyana, umlinganiselo we-5 ukuya kwi-10 mg ithatha ubuninzi kathathu ngosuku lubhekwa njengendlela ekhuselekileyo kwaye isebenzayo. I-powder ye-Sunifiram iyona nto ithathwa ngokuthe ngqo kwi-absorption.
Kuhlala kusisilumko ukuqala kunye nomlinganiselo omncinci othe wenyusa umgangatho wenkxaso entsha kunye nokwandisa ngokukhawuleza njengoko kuyimfuneko, kwaye loo ngcebiso ibaluleke kakhulu kwi-Sunifiram powder eluhlaza. Akusiyo kuphela isidakamizwa esitsha apho kungekho zilingo zomntu eziye zabhalwa, iindleko ezinkulu zingaba nemiphumo emibi engabonakaliyo kuquka ukukhupha nokukhupha ingqondo.
Ukongeza, ukunyamezela kwi-Sunifiram powder kungakha ngokukhawuleza. Abanye abasebenzisi batusa ukuhamba ngebhayisikili kunye nezinye i-nootropics ukuphepha le mpawu.
7.Sunifiram powder Ukuxhoma
I-powder Sunifiram inokufakwa kunye nezinye i-nootropics, kodwa abasebenzisi bayacetyiswa ukuba baqaphele kwaye baqaphele nge-Sunifiram iifayidi ezinobumba obuhlaza kunye kunye nezinye izongezo ezinamandla, ngokukodwa baze baqiniseke ukuba basabela njani kwi-powder Sunifiram.
Ukufakwa kwesithintelo kwimiphumo eqikelelweyo yokucinga: Oku kunokwenzeka ukuba luhlobo oluqhelekileyo lweSilifiram isitaki esiluhlaza se-powder kwaye lufezekiswe ngokubambisa i-Sunifiram powder kunye neyodwa okanye ngaphezulu kweercetam njenge-piracetam, i-oxiracetam, okanye i-Noopept. Ngenxa yokuba imidyarho yenza umtsalane onamandla kwiindawo zokugcina iingqondo, kubalulekile ukongeza umthombo omuhle we-choline njenge-CDP ye-choline, i-Alpha GPC, okanye i-centrophenoxine kule hlobo lokugcina.
Ukufakwa kwesithintelo sokwandiswa kwemizwelo: I-Aniracetam iyaziwa ngokubeka kakuhle i-Sunifiram powder eluhlaza ukuphucula imizwelo. L-itanine, ekhuthaza ukuveliswa kwe-dopamine, i-serotonin, ne-GABA kwaye iyenze njenge-glutamine i-reuptake inhibitor, iphinda ilandele kakuhle i-Sunifiram powder. I-Sulbutiamine, eyenza i-cholinergic, i-dopaminergic, kunye ne-glutamatergic transmission, enye yongezwa kakuhle kulolu hlobo. Njengamaxesha onke xa kusetshenziselwa isongezelelo se-racetam, umthombo omuhle we-choline kubalulekile kokubili njengokuba unobungqina kunye nokuthintela intloko kunye nezinye iziphumo ezingathandekiyo.
8.I-Sunifiram powder Imiphumo yangaphandle
Ingxenye enkulu, i-Sunifiram powder eluhlaza ithathwa njengekhuselekile. Gcinani engqondweni, le nto isongezwa ngokutsha. Xa kuthethwa oko, kukho uphando olunzulu lwekliniki kunye nophando oluqhutywe. Ukuba abasebenzisi bahlala kwi-dose ephakanyisiweyo, umngcipheko weempembelelo zecala ziphantsi.
Ezinye iziphumo ezibi zecala zifake; intloko, ukuxhalaba xa i-Sunifiram ipowder igqithisa, i-nausea, ukungazinzi, nokunyuka kwengqondo. Ukuba ufumana iintloko, zama ukuthatha isinxephezelo se-choline kwindawo yakho. Oku kudla ngokuchasene nale mpembelelo, njengokuba sisona siganeko esiqhelekileyo. I-Choline iyadingeka ukuze kuveliswe i-acetylcholine. Xa le nto isondlo isweleka, ngamanye amaxesha iintlungu ziba namava.
Ukuba unenkxalabo, funda kwiingxelo malunga nabasebenzisi abanolwazi. Kufuneka uxoxe nogqirha wakho malunga nayiphi na ingxaki onokuyenza. Ukuba iziphumo zecala ziqhubeka okanye ziba nzima, ziyeke ukusetyenziswa.
9.Uhlolo lwe-Sunifiram powder
I-sunifiram ipowder eluhlaza yinto enomdla kwaye inokuthenjisa entsha ye-nootropic, ihambisa ingqiqo enokuqonda, imizwa, iingqiqo, kunye ne-energy kwifom ye-ultra-concentrated and powerful.
Ngeli xesha lingaziwa njengamanye ama-nootropics angokwesiko, abaninzi abasebenzisi babecinga ukuba bayayithanda kwaye bayisebenzise rhoqo, kodwa akusiyo inkxaso yokuthathwa ngokulula okanye ingadli ngokunyamekela ngenxa yokungabikho kophando. Nangona uphando lwezilwanyana ezenziwe kwixesha le-15 leminyaka elidlulileyo lubonisa ukuba likhuselekile, linyamezeleke kwaye lingahambi, libalulekile ukuba likhumbule ukuba akukho zifundo zomntu eziye zabhalwa kwaye ezininzi ziyaqhubeka zaziwa malunga nale ncediso enamandla.
Kubasebenzisi abathandayo engqondweni ukuba le entsha kunye nakwimilinganiselo ethile engaziwayo, ngokuyithatha ngokufanelekileyo kwaye ibeka ingqalelo imiphumo yayo, i-Sunifiram powder ingaba yongezwa kakhulu kwi-nootropic routine.
10.Izinzuzo athenge i-Sunifiram powder kwiAAS:
tags: YITHETHA i-Sunifiram powder, I powifiram powder
I-J-147 Powder IsiGqeba sokuThengisa nokuThengisa okupheleleyo	I-CDP i-Choline Powder: Iingcebiso kunye neZibonelelo kunye neempembelelo ezisecaleni-Iimpawu zeNootropics ezichanekileyo